डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, सांसद, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल : १८ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ । यो निर्वाचन घोषणासँगै जनतामा खुशियाली छाएको छ । सकारात्मक
मानव बेचबिखनविरुद्ध अनुसन्धनात्मक कृति प्रकाशित
काठमाडौँ, १ जेठ । महिला, कानुन र विकास मञ्च नामक सामाजिक संस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दामा क्षतिपूर्तिमाथिको पहुँच नामक अनुसन्धनात्मक कृति प्रकाशनमा ल्याएको छ । कृतिमा मानव बेचबिखन तथा
ठूलो आकारको मतपत्रप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया
(भीष्मराज ओझा): ललितपुर, ३१ वैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ललितपुरलगायत जिल्लामा भएको ठूलो आकारको मतदान पत्रका कारण मतदाताले मतदान गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह
अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन : कति छिट्टै बितेछ दुई दशक !
प्रकाश सिलवाल: काठमाडौँ, ३० वैशाख । “दुई दशकअघिको स्थानीय निकायको निर्वाचनको दिन म झल्झली सम्झिरहेको छु ।” कीर्तिपुर नगरपालिका–६ नयाँबस्ती निवासी विष्णु्माया आचार्य भन्नुहुन्छ, “शनिबार दिन थियो, बिहान ४ बजे
(एकराज पाठक) : काठमाडौँ, ३० वैशाख । चीनको सियान युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्स्का नेपाली प्राध्यापक डा.राजिवकुमार झाले बेइजिङबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिका एसिया प्यासिफिक डेलीलाई दिएको अन्तरवार्तामा ओबिओआरमा नेपालले हस्ताक्षर गरेकोले
(भीष्मराज ओझा): काठमाडौँ, ३० वैशाख । आइतबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुने स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतदानका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । झन्डै
मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल : सिर्जनात्मक प्रयोगदेखि दुरुपयोगसम्म
प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, २९ वैशाख । “बीउ छरे पो अन्न पलाउँछ, केही नछरे झार पलाएर हैरान बनाउँछ । आफै विचार गर्नुस् भोट दिएर आशा जीवित राख्ने कि भोट नदिई
मौन अवधिअघिको प्रचार : पानीले रोकिएन
(प्रकाश सिलवाल): काठमाडौँ, २८ वैशाख । मनोनयनपछि प्रचारका लागि पर्याप्त समय नभएका कारण स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका दलहरुलाई मौन अवधिअघिको प्रचारको अन्तिम दिनसम मतदाताकहाँ पुग्न निकै चटारो प¥यो । आज अपराह्न
सबै गाउँ र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने दलहरुको प्रतिवद्धता
काठमाडौँ, २७ वैशाख । करिब दुई दशकपछि देशमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आकर्षक योजना अघिसारेका छन् । पार्टीहरुबीच स्वास्थ्य
‘ट्रेड टावर’ काठमाडौँलाई आवश्यक छैन
राजु शाक्य : काठमाडौँ, २६ वैशाख । काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर बनाउने प्रतिबद्धता यतिखेर महानगर प्रमुखका उम्मेदवारहरुबाट व्यक्त भइरहेका छन् । काठमाडौँलाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर बनाउने हो वा मौलिक कला
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन प्रचारप्रसारमै अर्बौं खर्च
(हरि लामिछाने) : काठमाडौँ, २५ वैशाख । आगामी आइतबार हुन लागेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि अर्बौं रकम खर्च हुने देखिएको छ । प्रदेश नं ३, ४
प्रमुख दलका घोषणापत्रः आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित
(रमेश लम्साल/हरि लामिछाने) : काठमाडौँ, २३ वैशाख । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुन केहि दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक भएका प्रमुख दलका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक